डिजिटल बैंकिङ : के के कारोबार गर्न सकिन्छ ? - Arthapage
डिजिटल बैंकिङ : के के कारोबार गर्न सकिन्छ ?
प्रकाशित मितिः ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार १४:३९ May 22, 2021
कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । यो संक्रमणबाट बच्नका लागि हरेक देशहरुले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि भिडभाडमा नजानका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपाय नै भिडभाडमा सहभागि नहुनु हो ।
प्रकाशित मितिः ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार १४:३९ |
Prevराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाइ लड्ने विपक्षी गठबन्धनको घोषणा
Nextनेपालगन्ज उपमहानगरको उत्कृष्ट काम : कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको विउ वितरण